तिब्र गतिमा गुडिरहेको गाडी अचानक ! रोकेर हेर्दा प्रहरी नै तिन छक्क ! « गोर्खाली खबर डटकम
तिब्र गतिमा गुडिरहेको गाडी अचानक ! रोकेर हेर्दा प्रहरी नै तिन छक्क !
काठमाडाैं । अमेरिकाको यूटा राज्यमा खल्तीमा तीन डलर बोकेका बालकले आफू महँगो गाडी किन्न अर्को राज्यतिर जान लागेको प्रहरीलाई बताएका छन्। धेरैजसो पाँच वर्षीय बालकहरू भान्छामा दूध पोखेर वा कुकुरको पुच्छर ता’नेर अभिभावकलाई त’नाव दिन्छन्। तर पाँच वर्षीय एड्रीअनले परिवारको गाडी सडकमा निकाले र प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे। राजमार्गमा ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुडिरहेको गाडीले सडक अ’नुशासन पालना नगरेको देखेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। चालकले प्रहरीको निर्देशनअनुसार गाडी रोके। तर चालकको आसनमा एउटा बालकलाई देख्दा प्रहरीहरू छक्क परे। बालकले आफू म’हँगो ल्याम्बोर्गीनी गाडी किन्न हिँडेको बताए।
ती बालकका अनुसार आफूले कम्तीमा एक लाख ८० हजार डलर पर्ने गाडी किनिदिन गरेको अनुरोध आमाले नमानेपछि रि’साएर उनी घर छोडेर हिँडेका थिए। “उनले आफैँ गाडी किन्न उक्त गाडी चलाएर क्यालिफोर्नियातिर जाने निर्णय गरे,” प्रहरीले ट्विटरमा लेखेको छ।
तर उनीसँग गाडी किन्न पुग्ने पैसा भने चाहिँ थिएन। “…किनभने उनको खल्तीमा तीन डलर मात्रै थियो।” एउटा भिडिओमा सो गाडी राजमार्गमा केही ह’ल्लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रहरीले चालकलाई केही समस्या होला भनेर रोकेको बताइएको छ।
कस्तो मु’द्दा लाग्ला?
प्रहरीले ती चालकलाई ‘तिमी कति वर्षका भयौ?’ भनेर सोधेको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। पाउदानसम्म खुट्टा पुर्‍याउन ती बालक सीटको छेउमा बसेको र आफ्नो घरबाट पाँच मिनेटको दूरीमा पुगेको प्रहरीको भनाइ छ।
सो घ’टनामा कसैलाई चो’ट नलागेको र स्थानीय अधिकारीले अभिभावकलाई का’रबाहीका लागि मु’द्दा लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्ने स्थानीय केएसएल टीभीले बताएको छ। घ’टनाको बेला दुवै अभिभावक काममा रहेको र ती बालक दाजुको निगरानीमा छोडिएको बताइएको छ। घ’टनापछि प्रहरीले बालबालिकाका पहुँचमा गाडीको साँचो नराख्न आग्रह गरेको छ।